Incwadana yedijithali yaseMoleskine | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Le ncwadi yamanqaku mhlawumbi eyona notebook iluncedo kuye nawuphi na umyili wemizobo Namhlanje, kuba isebenziseka ngokupheleleyo kwaye ngelixa igcina iimpawu zayo zemveli, inxulunyaniswa ngokuthe ngqo kwindawo yedijithali ngokusetyenziswa kwedijithali. Olukhetho olulungileyo kuba luyakukuvumela ukuba uqikelele uyilo lwakho kwaye uzicwangcise ngaphandle kokukhathazeka ngenkqubo yedijithali kunye nokwenza uhlengahlengiso olufanelekileyo kwisicelo.
Le pakethi ikhethekileyo yenziwe ngu Moleskine kwaye ibandakanya izinto ezintathu: Incwadana ekhethekileyo eyilelwe isixhobo esiphathwayo, usiba olubukhali kunye nokusetyenziswa okukhethekileyo. Ngale ndlela, kunokwenzeka ukuba wenze ikhompyuter kuyo yonke imixholo ebhalwe kwincwadana yokubhala yedijithali ngaphandle kwesidingo sokuthatha imifanekiso yedijithali yemizobo yethu emva koko ulayishe iifayile zethu okanye uzikrobe ngomgangatho ongaqondakaliyo. Ubume beencwadana zethu zokubhala zibonisa ukufana okufanayo neetafile zegrafikhi ezinamacala ajikeleziweyo kwaye usiba lukhanya kakhulu kwaye linekhamera efihliweyo eya kusivumela ukuba silungiselele zonke iintlobo zomxholo.
Kwelinye icala, isicelo simahla kubo bonke abasebenzisi be-iPhone kunye ne-Android kwaye sisivumela ukuba sigcine amanqaku okanye imizobo kunye nokuzithumela kwelinye ilizwe, sabelane ngazo kwiinethiwekhi zentlalo kwaye ke sihlele. Eyona nto ibalulekileyo malunga noyilo lwayo kukuba yipilisi yecwecwe yemveli, nangona kunjalo, iphepha lethu li-100 gram ubukhulu kwaye lenzelwe ukumelana nomsebenzi wokuzoba umzobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Incwadana yephepha ekwayiyo icwecwe elibonisa imifanekiso